Ku:Gudomiye Suleyman iyo Golahiisa Guurtida S/l.surta gal maha waxii lagu heshiis yahay in la dhawaco.
Ku:Gudomiye Suleyman iyo Golahiisa Guurtida S/l.surta gal maha waxii lagu heshiis yahay in la dhawaco. 0 July 18, 2015 in Articles by Staff SLL Media News Reporter Visits: 650
Ku:Gudomiye Suleyman iyo Golahiisa Guurtida S/l.surta gal maha waxii lagu heshiis yahay in la dhawaco. Bismillahi Raxmani raxaiim,ciid mubarik ku so dhawada.
Bishii March ayay ahayd Talo bixin mugleh oo aan warbahinta u soo mariyay Golahiina guurtida ee sharafta mudan.nuqul ka mid ahna waa kan ku lifaqan maqalkan talo bixinta ah ee aan maanta qorayo.waxan idiin rajeynaya in ilahay wax idinkaga duwo Taladan.
Waxan ogsonahay in xilalbadani idin saranyahay waxana ka mid ah 1.Naftiina xilka idinka saaran oo aad si fican u gudateen waxad ka shaqaysan mudo kordhinta xilkiina iyo kan dawladaba.lakin waxad baal marsantihiin xilka qaranka idinka saaran iyo xilka shacabka idinka saaran iyo xilka diinta idinka saaran wayo?
Somaliland marxaladan lagu majeerto waxay ku soo gaadhay isu tanasul iyo Talada oo lagula shurakoobo shicibka.waxaad baal marteen Mudadii komishanku cayimay oo ah mid laga soo gudbay.waxaad kaloo baal marteen mudadii sadexda xisbi qaran iyo xukumadu ku heshiiyeen idinkoo qarqoortay Mudo kordhin baal marsan heshiiska aay gadheen.
Sharafkii qaranka maydin eegin,sharafki shacabka maydin eegin,sharafki guurtida maydin eegin eegin,oo sharafkii idiin mudnaa maydin eegin oo ah in aaydin heshiiska lagadhay sharci garaysan ee sadexda xisbi qaran iyo xukumadu wadajir u wada gadheen.umada ka daaya wewerka iyo jaha warerka oo sharci gareeya Heshiiska lawada gaadhay.
Gebeogebo: Guurtinimadu maaha waxii lagu heshiiiyay in la dumiyo.
Guurtinimo maaha waxii ino dhisna oo Awood lagula dagalamo.
sidda:Isutanasulka iyo Talada oo shacbka shuraako lgula noqdo.
Qalinkii:Amiirka Muse gaadhane.
Nuqul ka mid ahTalo bixin hore.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim,S/c Ku soo dhawaada guurtiyayTaladan.
Markaynu ka fekeraynu Durufaha adag ee ka jira Dalka iyo wacyiga manta lagu jiro ee lakala dooranayo mustaqbalka danbe ee aaynu hiigsanayno oo ah ka midha dhalinta Hankeena iyo Himiladena Siyasadeed iyo Horumar waa sua’aal adag oo muhiimna ah.
Aniga oo aad idiin qadarinaya waxaad dib u racdaan tariikhda waxa furmaya quluubta golihina,Indhuhuna waxay arki donan sida ilaahay wax u kala bedelo ayamaha aan ku noolahay dunidan guudkeeda.
Imisa Hugaamiye oo shalaytoTalinayay ayaa Dalkii iyo Bulshadii ku dul duntay xukun jacayl awgii waxaynu arkayna umad shalay laga Gulaystay oo iyana Gulaysatay manta waxaynu kaloo arkayna Tujartii oo fuqaro isugu baxday iyo fuqaradi oo bedeshay tujaarti waxan kaloo arkayna Dadkii awooda laha oo tamar dareyay iyo kuwii Ducafada ahaa oo awood yeshay maanta noloshuna sida baay u soconay ilaa dhimasha deena.
Garbihiina ha eegina lakiin waxad eegtan Agagarka iyo waxyaba inagu xeeran,J.S/land Guul badan baay gaadhay iyo diirimad wacan laakin weli waxaynu joogna badhtamii.
Guurtidu qiimo weeyn ayay ugu fadhida shicibka somali-land waxaayna kala soo gudbeen marxalado kal duwan oo Runtii aad u adagTalooyin badan oo dhaxalgal ah ayaa laga faa’iday odayadii hore ilaahay haw naxaristo.waxan filaya in aay ka nolyihiin faro kutiris maanta waxayna ku sifoobeen guurti waxaad ka feejignataan in golihiina qiimaha iyo sharafta iyo karamada laha ee ku sifobay Guurtida in uu ku sifobo Golaha u adeega Xukuumada Taladana kula shuraakooba maslaxadaha Madaxweynaha.
Umadu walaac ayaay ka muujisay dhawaaqii Gudomiyaha Guurtida uu ka dhawajiyay iyadoo loo arkay in uu taggerayo Xukumada oo olole ugu jirta kordhis laba sanadood lagu qiyaasay.haddii aay dhacdo in aaydin wax ka bedeshaan taariikhda komishanku ka dhawaajiyay waxaay horseedaysa khilaf baaxad weeyn oo ku yimada Dalka iyo Bulshada somliland.
”Waxaad ogataan hadii madaxweynu iyo Golayasha qaranku Ixtiraami wayaan Xuquuqda bulshada iyo hanaanka doorashada,iyaguna in aay waayi doonan xaqa aay ku leeyihiin Bulshada iyo xaqa aay leeyihiin hay’adaha ilaaliya sharciga iyo kala danbaynata qaranka,,
Amiirka Muse gaadhane Birminham Uk
26/03/2017 - 20:08:20